2022 / 04 / 10 OkunyeIHolo yeSikhumbuzo sase-Ozaki Shiro "Inqaku leHolo yeSikhumbuzo" (Nombolo XNUMX) ishicilelwe.
2020 / 05 / 28 IsikhumbuzoMalunga nokubuyiselwa kwezinye izinto zomboniso
UShiro Ozaki, nothathwa njengoyena uphambili kwilali yaseBunshi Magome, ubuyise indlu awayechithe kuyo iminyaka eli-1964 de wasweleka ngo-39 (Showa 10) wayisebenzisa njengeholo lesikhumbuzo.UShiro wafudukela kwindawo yaseSanno ngo-1923 (Taisho 12) kwaye wafumana isikhundla esomeleleyo njengombhali odumileyo ngenxa yomculo obalulekileyo we "Life Theatre".
Iholo leSikhumbuzo i-Ozaki Shiro lavulwa ngo-Meyi ka-2008 ukwazisa ngendawo awayehlala kuyo uShiro (igumbi leendwendwe, igumbi lokufundela, ilayibrari, igadi) ukuhambisa ubumnandi beLali yaseMagome Bunshi kwizizukulwana ezizayo.Siyathemba ukuba abantu abaninzi baya kusebenzisa le holo yesikhumbuzo kwindawo ethuleyo enezinto ezininzi eziluhlaza njengesiseko esitsha sokuhlola iMagome Bunshimura.
Jonga umxholo wePanorama usebenzisa ikhamera eneedigri ezingama-360.Unako ukutyelela ngokuvakalayo kwiHolo yeSikhumbuzo se-Ozaki Shiro.
Imisebenzi kunye namagumbi okubonisa eShiro Ozaki Memorial Hall, izinto ezithandwa nguShiro, kunye negalari yezithombe zeholo lesikhumbuzo.
* Awunakungena kwesi sakhiwo